Fandosirana Hetra Sa Fanaovan-gazety Ara-politika? Mitohy Ny Ady Eo Amin’ny Gazety An-tsoratra Tsy Miankina Sy Ny Governemanta Zambiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2016 16:56 GMT
Dikasarin'ny lohatenin'ny gazety an-tsoratra The Post, manambara ny fanakatonana.
Tao aminà fandehan-draharaha vaovao, taorian'ny fakàna ireo entan‘ ny gazety an-tsoratra lehibe indrindra tsy miankina ao amin'ny firenena, ny 21 Jona 2016, nisambotra sy namotsotra taorian'ny fandoavana lamandy ny tompon'ny The Post, Freddy M'membe, nahazo ny Loka Iraisampirenen ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety avy amin'ny CPJ ny taona 1995, ny polisy Zambiana ; ny vadiny Mutinta Mazoka M'membe sy ny tonian'ny fanontàna, Joseph Mwenda, voalaza fa saika hiditra an-keriny tao amin'ny faritry ny fanaovan-gazety. Voalaza fa nodarohan’ireo manam-boninahitra ry zareo talohan'ny nitondràny azy ireo tany amin'ny biraon'ny polisy.
Nandeha tany amin'ny biraon'ny The Post izy telo ireo mba haka ireo fitaovana fampandehanana ny asany, taorian'ny nandidian'ny Fitsaràna momba ny Hetra ny Manampahefàna amin'ny Fampidiram-bola ao Zambia (ZRA) mba hamela ilay gazety an-tsoratra hanohy ireo asany — didim-pitsaràna izay tsy noraharahian'ny ZRA. Milaza ny ZRA fa manana hetra tokony aloha mitentina K68 tapitrisa (6,1 tapitrisa Dolara) ny The Post, hatramin'ny taona 2009. Nolavin'ilay gazety an-tsoratra io masom-bola io ary nangatahany ireo manampahefana mba hamerina hijery ireo tarehimarikany.
Fantatra tamin'ny fanaovana tatitra fanadihadiana sy fitsikeràna ireo governemanta nifanesy ny The Post. Naneho ny ahiahiny ireo fikambanana media eo an-toerana sy iraisam-pirenena ary ireo mpanao tolotra fanampiana, momba ny fifanandrifian'ny fotoanan'ireo fisamborana sy ny fangiazana ny entana ireo mpisera amin'ny Aterineto sasany. Namoaka fanambaràna ny governemantan'i Etazonia, nilaza fa mampiahiahy be ny fanakatonana ilay gazety an-tsoratra herinandro vitsy monja mialoha ireo fifidianana lehibe any Zambia. Ny volana Aogositra 2016 ho avy izao, handeha any amin'ny trano fisainana ireo Zambiana mba hifidy amin'ireo fifidianana izay ho solombavambahoakan'izy ireo ; sehatra lehibe ho an'ireo kandidà mpanohitra ilay gazety an-tsoratra, satria ny mediam-panjakana bodoin'ny governemanta sy feheziny.
Niteny tamin'ny anaran'ny polisy, nandiso ilay tatitra ny Mpitondrateny vonjimaika, Ray Hamoonga, tatitra izay nilaza fa nodarohan'ny polisy i M'membes sy Mwenda, mihaika ireo tsikera mba haka ireo tatitra avy any amin'ny hopitaly, ary raha toa ka nisy tokoa izany, hitatitra ny zava-niseho any amin'ny biraon'ny polisy ao amin'ny firenena. Nanao fampitandremana anefa izy, nilaza fa afaka mampiasa herisetra farany ambany ny polisy eo amin'ireo olona manohitra ny fisamborana.
Fa tsy nampisy fahatokisana ny fanambaràny. Manontany tena matetika ireo Zambiana maro, ny amin'ny fahaizana miasa sy ny tsy fombàn'ny polisim-pirenena na amin'iza na amin'iza, ary matetika mampahatsiahy azy ireo fa tsy hery izy ireo fa sampandraharaha. Fantatra sy malaza amin'ny hoe Herin'ny Polisy ny polisin'i Zambia, fa mba hanovàna ny fihetsiky ny vahoaka sy hanatsaràna ny fifandraisana arak'asa eo amin'izy ireo, novàna hoe Sampandraharahan'ny Polisy ilay anarana — noho izany, tafiditra ho ao amin'ny sampan-draharaha mpanome tolotra ho an'ny vahoaka ny polisy.
Manontany tena i Moses Munsaka hoe inona ilay hery farany ambany azo ampiasaina:
Tokony tsy ho ekena ny fampiasàna hery farany ambany ataon'ireo lahilahy sy vehivavy mampiasa Fanamiana. Hatraiza izany farany ambany izany? Ahoana no hahafahana mandrefy izany? Tsy misy ilàna fiarovantena (sento). Raha nohararaotina tamin'ny ara-fihetsehampo na ara-tsaina ilay olona, inona no mbola takian'ireo lehilahy sy vehivavy manao fanamiana amin'ireo olona telo ireo. Miangavy anareo hiasa toy ny matianina fa tsy ara-politika. Sampandraharaha ianareo fa tsy hery. Tazony foana ny maha-matianina. Izay ihany.
Nandinika izao i Sylvester Chisanga :
Mahatsikaiky no sady mampalahelo ihany koa. Tsy mety ho an'ireo Zebra no hitatitra any amin'ireo Liona mikasika ny herisetra nataon'ireo Liona tamin'ireo Zebra, ary hiandrandra hoe tena ho henoina sy tohanana tokoa! Ho faly fotsiny ireo liona, hampiasa ny henan'ireo Zebra ho toy ny ‘Colgate’ hanadiovana ireo nifiny.
Nitaraina toy izao i Charles Nalishebo :
polisy iza no hitateran'izy ireo, satria ny polisin'i zambia aza voaara-mason'ny pf [ny Front Patriote (Sampana Tia Tanindrazana) eo amin'ny fitondràna]. tsy matoky polisy intsony izahay satria izy ireo no olona tena tratran'ny kolikoly [be indrindra]
Nanoratra izao i Bwalya Katongo:
Miverina amin'ny fanjakàna mahery setran'ny antoko tokana isika! Ary ho tara loatra ireo mpitsabo (sic) vao hahatsapa an'io!
Kanefa, tsy ny rehetra no momba ny gazety an-tsoratra The Post. Tsapan'ireo sasany mpisera amin'ny Aterineto fa manao fampisehoana i M'membe, mba hahazoana ny fon'ireo vahoaka. Nilaza izao i Mike Mubanga :
Olona adala ihany no mety hilaza fa voadaroky ny polisy i Mmembe. Toy izao ve ny endriky ny olona voadaroky ny polisy. Mampanetsetra fotsiny izy hoe “cadre” voadaroka tao amin'ny toeran'ny polisy.
Any Zambia, antsoina hoe ‘cadre’ ny olona manohana antoko politika iray manokana — indrindra ireo hita ho tena mavitrika amin'izany. Ny fanehoankevitr'i Mubanga tao amin'ny Facebook dia manome ohatra iray amin'ny ambaratongan'ny herisetra ao amin'ny firenena tamin'ny fikarakaràna ireo fifidianana hataony ny volana Aogositra — ary manatsoaka fa manimba ny tantaran'ireo tena nodarohan'ny polisy noho ny firehany ara-politika, ny fitarainan'ilay tonian-dahatsoratra hoe nidaroka azy ny polisy.
Namaly ny fanehoankeviny avy eo i Mubanga, nilaza hoe:
Nasaina naka taratasy fanamarinana ara-pahasalamana izy ary ny tatitry ny herisetra tany amin'ny polisy. Raha tena voadaroka tokoa izy, hanao izany izy, satria izy milaza ho mpisolovava ary fantany tsara ny tokony atao amin'ny raharahanà herisetra.
Brian L. Kasoka kosa nanao ilay resabe ho fahadisoan'ny kajikajin'ilay tompon'ny gazety an-tsoratra :
Tafahoatra Loatra ny Lonilonin'i Mmember Ka nahatonga Azy Ho Lasa Any Amin'ny Efitra Fitazonan'ny Polisy Mihitsy. Raha Nihaino Ny Torohevitr'Ireo Olona Hafa Izy, Efa Nosokafana Ny The Post Ankehitriny.
Tao anatin'ireo maro, ny fihetsehampo teo an-toerana dia hoe tokony handoa ny trosa tokony aloany ny The Post. Ny ady mbola mitohy izao dia ny fampahafantarana ny olona ny tena maha-zava-dehibe ny fananana media tsy miankina maharitra, izay afaka miserasera hevitra tsy momba na iza na iza — amin'ity taonan'ny fifidianana ity sy ny manaraka.
18 ora izayAzia Atsinanana